A otutu oge ihe engine ihihi bụ-apụghị izere ezere, Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-eji a ọjọọ mmanụ, E nwere ọtụtụ adịghị na mmanụ, Ọ bụghị nanị na ọ na-amụba iyi na dọkatụrụ adọka na engine, Ọ nwekwara ike ime ka engine mmanụ ehi ehi. Ka anyị tụlee maka ụfọdụ mkpọpu mmiri n'ime mkpuchi ụlọ valvụ. Gịnị na-akpata valvụ cha ...
Ọdịiche nke iburu akara na okpu igwe Ọrụ bụ ihe dị iche - iburu mgbanaka akara bụ ịrụ ọrụ akara ya yana ndụ ọrụ nwere mkpa dị mkpa. - Iburu uzuzu uzuzu bu igbochi ibughari n'ime uzuzu na irighiri ihe ndi ozo na emetuta oru. Ihe dị iche iche, na-agba akara r ...
Olee otú ọtụtụ ụdị nke akpakanamde akàrà?
Akara Automobile Kwuru na akụkụ dị iche iche. enwere ike kewaa ya n'ime uzo ndi a dika akuku eji: Ntughari mmanu mmanu, akara mmanu crankshaft, engine engine engine, valvụ azuokokoosisi mmanụ, akara mmiri mgbapụta mmiri, akara mgbapụta mmanụ mmanụ, nnyefe mmanụ akara, akara akara mmanụ axle. wheel ehi akara, ...
mmanụ akara Common ọdịda ihe na nchọpụta nsogbu ụzọ
Akara mmanụ bụ nke ihe mmechi na-agagharị, na ịdị adị nke "ihe nkiri mmanụ dị oke egwu" bụ ọnọdụ zuru oke na nke dị mkpa nke mkpuchi mmanụ. N'ihi na ịdị adị nke ihe nkiri mmanụ na-ete mmanụ dị mkpa iji hụ na mkpọchi esemokwu nke mmanụ mmanụ, na ịdị adị nke lubri ...
Akara mmanu na o mgbanaka ogbe ahia
Mgbe ịchọrọ ịchọta akara a pụrụ ịtụkwasị obi na O-yiri mgbaaka na China. Enwere ọtụtụ ndị na-emepụta akara akara, ma eleghị anya ị ga-enwe mgbagwoju anya, n'ihi na ha bụ mpaghara dị iche, na ọnụahịa dị iche iche..Ọ ga-adị iche iche maka akara dị iche iche. Kedu otu esi achọta akara mmanụ a tụkwasịrị obi na o mgbanaka? 1- Thelọ ọrụ mmanụ akara ...
Cikpụrụ nke hydraulic akàrà
A na-ejikarị ihe eji eme mmanụ eme mmanụ. Ihe mgbaaka akara nwere usoro dị mfe, arụmọrụ akara nke ọma na esemokwu dị ala. Enwere ike iji ya maka ntụgharị ntụgharị na ntụgharị ntụgharị, mana ejiri ya maka idozi akàrà, dịka akàrà n'etiti pipeline, isi cylinder na ...
Udi nke ike sterịn mgbapụta mmanụ akara
Ike sterị mgbapụta mmanụ akara: 1- ịgagharị bọl ike sterịn gia mmanụ akara: ntinye mmanụ akara na rocker shaft mmanụ akara. 2 - ihe nkedo ihe ntinye uzo: ihe ntinye mmanu mmanu, ihe nkedo mmanu nkpuchi, ihe nkpuchi ihe ndi ozo. 3 - ihe nkedo nke mmanụ ụgbọ ala. Oke osimiri 4-mmanụ ...
Ihe ngosi magnetik na njirimara
Magnet mmanụ akara bụ ngwaahịa e mere mgbe ọtụtụ afọ nke nnyocha na nnwale. Ọ na - eji usoro nkwụnye ụgwọ magnetik eme ihe na teknụzụ ọhụụ ọhụụ, yana nrụnye dị mfe nwere ike idozi nsogbu ndị siri ike ikpochapụ na akụkọ ihe mere eme. Ọ bụghị naanị na respon ...
Ringdị mgbanaka akara Rubber
Ihe yiri mgbaaka nke U, nke a na-ejikarị arụpụta usoro hydraulic na akara azụ. A na-ejikarị ya eme ihe na ihe ndị na-ewu ụlọ hydraulic cylinder seal. A na-ejikarị mgbanaka rụọ ọrụ maka akara akara na akara akara na-agbanwe agbanwe. Mgbe ejiri ya mee ihe mmegharị Rotary, ọ nwere oke njedebe pere mpe ...
Ngwọta maka nchapu mmanụ nke Akara mmanụ Gearbox?
Nzipu igwe bu ihe kachasi anya na injinia. Ọ na ọtụtụ-eji na-ebunye ike na esemokwu nnyefe tumadi site esemokwu ike nke igwe akụkụ, gụnyere eriri nnyefe, eriri nnyefe na esemokwu wheel nnyefe. Basic ngwaahịa nhazi ọkwa: reducer, br ...
9 Ndụmọdụ maka akara akàrà roba?
Kedu ihe ndị dị mkpa ị ga-atụle mgbe ị na-ahọrọ akara akara kwesịrị ekwesị maka itinye ya? Ọnụahịa ọkacha mma na agba tozuru etozu nke akàrà Ihe niile na-emetụta ihe na sistemụ sistemụ ahụ: dịka oke ọnọdụ okpomọkụ, mmiri na nrụgide Ndị a bụcha ihe niile dị mkpa iji mee ihe ...
Ọkachamara akara mechnical seal emeputa nnukwu ihe mkpuchi roba ngwaahịa ụlọ ọrụ Mechanical seals na-arụ ọrụ na mmiri mmiri na-ajụ n'ozuzu na-adabere na mmiri mmiri na-eme ihe nkiri nke mmiri mmiri mepụtara n'etiti esemokwu esemokwu nke mgbagharị na mgbanaka na-anọ ọdụ maka mmanu. Ya mere, ọ dị mkpa ịnọgide na ...